Ukugwema ukulimala okungenzeka, sebenzisa izindlela zemvelo, usebenzisa izinwele ukukhanyisa ngezindlela zemvelo. Banikeza umthunzi omnyama, kanti izinwele azilimazi.
Sekuyisikhathi eside, lapho kuphela ama-coloring agents esakhiwe, abesifazane badlala izinwele zabo. Kodwa imibala yesikhumba yanamuhla isebenzisa amakhemikhali abonakalisa izinwele, esizama ukugwema. Uma ufunda ukunciphisa amakhambi omuntu wezinwele, uzothola indawo yokugaya amakhemikhali. Kodwa akuzona zonke izinto zemvelo ezingasetshenziswa ngempumelelo ukuze zikhanyise izinwele. Lezi zinto zemvelo eziqinisekisiwe zingatholakala ekhishini lakho futhi zisebenzise lezi zinto zokubola ukukhiqiza izinwele ezimibalabala. Bangakwazi ukukhanyisa izinwele zezinwele ezimbili, uma kuqhathaniswa nombala wezinwele zakho. Ngaphezu kwalokho, kuyindlela yokonga yokukhanyisa izinwele.
Izithako zizosiza ukuboya izinwele ngaphandle kokulimala:
Ngaphandle kokuthi ama-lemons ayasiza futhi ayinambitha, asetshenziselwa ukukhanyisa izinwele nesikhumba. Ijusi le-lemon lineziqu ze-acids, ezisetshenziselwa i-bleach yemvelo nezinwele, okunikeza izinwele ukukhanya okukhanyayo. Uma ijusi lizohlala lihlale phezu kwezinwele, umkhanyo uzoba umthunzi. Ijusi elimnandi lemonti lisetshenziselwa izinwele futhi lishiye amahora amane, lapho sizwa inzwa evuthayo, siyazihlamba ijusi bese sizama futhi ngesinye isikhathi. Umphumela wejusi kalamula uzobonakala uma ikhanda lifakwa ngaphansi kwemisebe yelanga. Uma ufika ogwini ukuya ekushiseni i-sunbathe, sebenzisa ijusi elimnandi lemonsi ngezinwele.
It has a iphunga elimnandi futhi ukunambitheka futhi kusiza ukukhanya izinwele. Lungisa ingxube yamafutha omnqumo, amanzi, uju nesinamoni, bese usebenzisa le nhlanganisela ezinwele. I-cinnamon noju ziqukethe izithako ezenza njenge-hydrogen peroxide.
Hlanganisa isigamu sendebe nenyosi yamanzi, faka izipuni ezimbili zamafutha omnqumo nezipuni ezintathu zesinamoni. Kuye ubude bezinwele, sizokwandisa inani lezithako. Engeza isinamoni engaphezulu, uma enganele, izobangela ukuba izinwele zingabonakali kalula.
Sizofaka le nhlanganisela ezinyaweni bese sisishiya amahora amane. Uma isikhathi eside ingxube izokwenziwa, umphumela obonakalayo uzobonakala. Kodwa udinga ukwazi ukuthi ekunciphiseni kakhulu izinwele kungaba ama-shades amabili. Faka i-cap yewashi noma ugoqe ikhanda ngethawula elifudumele ukuze ingxube ingatholi ifenisha noma izingubo. Uma isikhathi siphela, geza ingxube.
Izinwele zingacaciswa, uma nje unezinwele ezimhlophe noma ezingenabulungisa, okungukuthi, izinwele ezine-rusty noma golden gold. Abaqhawe baba ngama-2 amathoni, umphumela wokushiswa kwezinwele ezidwetshiwe kahle kuzovela.
Izindlela ezilula "zikagogo"
Akunabungozi, kodwa ukulimala kwabo kuncane kakhulu.
3% i-hydrogen peroxide, ikhona kuwo wonke ama-pharmacy. Indlela elula ukuthululela ku-vial, lapho kukhona isibhamu se-spray futhi sibafake nsuku zonke. Kulo, ukuhlushwa kwe-peroxide kuncane kakhulu, kodwa uma kusetshenziselwa njalo, kungacaciswa.
Ijusi lemonti eligxilisiwe, lidayiswa ezitolo ezinkulu. Siyichitha ngesilinganiso esingenakubalwa se-hydrogen peroxide futhi sisebenzise ihora elilodwa ngezinwele ezimanzi. Sisebenzisa i-atomizer efanayo. Ngemuva kwesonto, izinwele zikhanya, ukujula nokugcoba kwenyuka, futhi ikhwalithi yezinwele ayizange ishintshe. Ungayifaki esikhundleni sejisi lemon, hhayi neze i-citric acid. Ikhiqizwa ngokuvutshelwa nge-isikhunta isikhunta, kusuka kuma-molasses, hhayi ngokucindezela ijusi kusuka kulamula. I-asidi ye-citric ayikusizi ukukhanda izinwele.
Abaningi bayazi ukuthi bayihlobisa kanjani izinwele nge-chamomile. Ukwenza lokhu, ake sithathe 100 g we-chamomile bese ugcwalisa ngo-2 tbsp. amanzi, upheke imizuzu emihlanu, cwilisa. Futhi engeza 30 g we-glycerin. Siyigcina esiqandisini, sisebenzise kaningi, sishiye okungenani imizuzu engu-30. Izinwele ezimanzi eziqhathaniswa nezinwele ezomile zingcono ukucaciswa.
Uviniga (kusuka ewayini elimhlophe, amagilebhisi, apula) kanye ne-rhubarb. Amaphesenti kule recipe awahlonishwa, nje thatha uviniga omncane kanye ne-rhubarb engaphezulu. Iviniga kufanele ihlanganise i-rhubarb ngokuphelele. Sipheka imizuzu engu-15. Umhluzi obangelwayo ukhanyisa kahle, unikeza i-platinum-golden hue. Umhluzi ugcinwe esiqandisini namaviki amabili okuqala esisisebenzisa ngaphambi kokuhlanza konke ikhanda. Umphumela ubonakala ngaphezu kokupheka kanye ne-chamomile. I-Rhubarb ingathengwa esitolo esihle, hhayi ukuthenga uviniga wezithelo ezishibhile, izolimaza, futhi uviniga ophezulu futhi obizayo uyokwenza izinwele zakho zibushelele futhi ziwuqinise.
Udweba izinwele ezikhanyayo
Le recipe ngumchwepheshe wase-Italy ekuthuthukiseni impilo, kunzima ukwenza, kodwa ekugcineni sithola upende olucacile.
Izithako: 50 amagremu we-chamomile izimbali, ama-gramu angu-50 omunyu womtholo, insimbi engenasinhla i-casserole, ikhwalithi enhle ye-aple cider uviniga, ama-gramu angu-50 e-rhubarb aqoshiwe, ama-gram angu-20 e-calendula izimbali, i-strainer enhle .70 ml we-limoncello liqueur (upheke) ukugeza i-cap, iglavu, noma yiliphi i-balm yezinwele.
Pheka i-rhubarb ku-apula cider uviniga imizuzu engu-15, engeza i-calendula ne-chamomile. Ukupheka ngesembozo kuvaliwe ukushisa okuphansi kwamanye amaminithi angu-5. Kulula futhi ubeke umhluzi, engeza "i-Lemoncello", ujusi kalamula, uju. Leli ketshezi elixubile lixubene ne-balm, sifudumala izinwele ngefilimu noma i-cap yokugeza isigamu sehora.
Kodwa amasonto amabili sizobe silungiselela indawo ye-liqueur yaseLatin "i-Limoncello". Ukuze wenze lokhu, udinga: ama-ayisimu ayisikhombisa (cishe ama-100 g), ingilazi yamanzi, 250 g ushukela, 250 ml we-95% utshwala.
Beka indwangu ye-lemon emgodini weglasi, ugcwalise ngotshwala uphinde ugcizelele izinsuku ezingu-10, nsuku zonke siyagubha imbiza. Bese wengeza isiraphu (amanzi kanye noshukela), gcizelela izinsuku ezingu-5 nobunzima.
Ukuze uthole ukukhanya okukhanyayo
Ake silingane ne-husk of the anyanisi kanye negxolo lomthunzi bese ulixuba. Ingilazi yenhlanganisela izogcwala ngamanzi alitha abilayo, sibambe ihora elilodwa ngomlilo. Vumela ukupholisa nokupholisa lokhu izinwele zomhluzi. Sizobopha ikhanda ngenhlanhla efudumele bese ubamba ihora elilodwa. Ungahlanza izinwele zakho. I-Decoction iyisiluleko esihle sokulahlekelwa kwezinwele.
Sithatha u-50 g wezinhlanzi ngama-anyanisi, lokhu kungokwesandla esincane, sigcwalisa i-tbsp engu-1. amanzi abilayo, ubilise amaminithi angu-20, epholile, epha. Ngemuva kokugeza okunye, hlambulula ngalokhu ukukhipha izinwele.
I-hue yase-Golden brown
Ukuze wenze lokhu, thatha ingxenye yengilazi ye-anyanisi, ugcwalise ingilazi yamanzi abilayo, ubilise imizuzu engama-20, uhlanganise bese ufaka amathisipuni amabili we-glycerin.
Thatha izipuni ezimbili zejusi kusuka ku-green peel of walnuts, uhlanganise nengxenye yengilazi yotshwala. Izinwele zihambelane nalokhu ukumnika futhi zibambe imizuzu engu-30.
I-green peel yamantongomane achotshoziwe, ahlanjululwe ngamanzi ukuze agcole futhi agqoke izinwele imizuzu engu-20, ngamanzi.
Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha indlela engokwemvelo yokwehlisa izinwele, udinga ukwazi ukuthi zenza izinwele eziseduze kunalezo ezinikezwa ngobuhle bezinwele. Ukunakekela izinwele ezicacisiwe, kuzodinga ukunakwa okwengeziwe kuwe.
Ekuphetheni, ake sibange, ngokuqinisekile, ngezindlela zemvelo zokukhanyisa izinwele, futhi hhayi ezinzima kangaka. Umphumela uzolingana nomzamo. Zama, sungula izindlela zokupheka ezintsha, zenze ezinye. Inhlanhla kuwe!
Silwa nezinwele ezinamafutha: zokupheka zamaski asekhaya aphumelele kakhulu
Indlela yokukhanyisa izinwele ekhaya
Indlela yokukhetha umbala wezinwele
Ukudla okunempilo, isibalo esihle
Ukuphila komuntu siqu uKarina Andolenko: indoda, izingane ... namakati
Yimuphi u-tan manje ojwayelekile?
Izindebe ezihle: susa ama-breeches egibele ekhaya
I-Horoscope ngo-February 2018 - I-Pisces owesifazane - kusuka kuTamara Globa no-Angela Pearl
I-hyperbole enesitayela: izitayela ezimbili zezesekeli
I-Varicose veins isifo
Indlela yokujabula uma ufuna ngempela ukulala